I-Audiense Connect: Ipulatifomu Yokumaketha Ethuthuke Kakhulu Ye-Twitter Yebhizinisi | Martech Zone
I-Audiense Connect: Ipulatifomu Yokumaketha Ethuthuke Kakhulu Ye-Twitter Yebhizinisi
NgoLwesibili, Okthoba 27, 2020 NgoLwesibili, Okthoba 27, 2020 Douglas Karr
Yize umhlaba omningi usuthathe ezinye iziteshi zokuxhumana, ngiyaqhubeka nokuba ngumlandeli omkhulu we-Twitter. Futhi i-Twitter iyaqhubeka nokusiza ukushayela ithrafikhi kumasayithi ami uqobo nawomsebenzi ngakho angisoze ngakuyeka noma kunini!
I-Audiense Connect iyipulatifomu eyakhelwe ukumaketha kwebhizinisi le-Twitter futhi yethenjwa yizinkulungwane zemikhiqizo nama-ejensi emhlabeni wonke uku:
Ukuphathwa Komphakathi Nokuhlaziywa - Thola ulwazi olunembile ngomphakathi wakho ku-Twitter. Yazi abalandeli bakho ngokujulile futhi uhlanganyele kahle nabo
Izingxoxo nezingxoxo - Ngomakhi we-Chatbot we-Audiense Connect, ungazenzela eyakho ingxoxo yokukhetha ukungena ngokuchofoza okumbalwa. Bandakanya ngqo nababhalisile / amakhasimende akho.
Ukuqapha Okuthuthukile Nokulalela - Qedela ukumbozwa komhlaba wangempela wesikhathi sangempela nomlando (kusukela ngo-2006) okuqukethwe yi-Twitter. I-Audiense inikeza ukuhlaziywa kwengxoxo nokukhomba okukodwa komkhankaso.
Izithameli ze-Twitter ezenzelwe ukukhangisa - Dala ababukeli be-Twitter abasebenza kakhulu emakethe. Akunandaba ukuthi izithameli zakho eziqondiwe zibaluleke kangakanani. Ukuvumelanisa okuhlala njalo nge-akhawunti yakho yezikhangiso ze-Twitter.
Izici ze-Audiense Connect
Isikhathi esihle seTwitter - Thola ukuthi isikhathi sakho esingcono kakhulu sokuthwebula sinini futhi usebenzise wonke ama-tweet owathumelayo. Thola isikhathi esihle kakhulu se-tweet kusuka kusampula yangokwezifiso yabasebenzisi futhi ufunde lapho izithameli zakho ziku-inthanethi.
Dlulisa amehlo kumphakathi wakho we-Twitter - Thola ulwazi olunembile ngomphakathi wakho ngezindlela ezahlukahlukene, wazi abalandeli bakho ngokujulile futhi uhlanganyele kahle nabo. Maka futhi unwebise imininingwane ye-Twitter.
Isihlungi se-Twitter, Landela, bese Ungalandeli - Thola abalandeli bakho abasha bese ubalandela kalula. Hlakanipha futhi ube nenhlonipho. Buyisela okulandelayo uma kuyinqubomgomo yakho. Thola abangani abanomsindo, abangahle babe ogaxekile, nabasebenzisi abangasebenzi. Sicela ubheke imithetho nezinqubomgomo ze-Twitter.
Ukuhlaziywa Kombangi we-Twitter - Qhathanisa kuze kufike kwamanye ama-akhawunti we-Twitter noma izimbangi ukuze ukwazi ukubona ukuthi ngubani onabalandeli abaningi nokuthi bangobani, abasebenzisa ama-tweets amaningi, ukuthi bathini ngokujwayelekile ku-tweet njll.
Izithameli ze-Twitter kanye nokuqonda komphakathi - Uma ufuna ukwazi ikhwalithi yomphakathi wakho we-Twitter lo ngumbiko ophelele: amashadi wezoni lesikhathi, amashadi wolimi, abasebenzisi ngenombolo yabalandeli, abasebenzisi ngomsebenzi wakamuva, njll.
Phatha uhlu lwe-Twitter - Hlela abalandeli bakho nabangane ngokwakha uhlu lwe-Twitter. Zibandakanye nabantu abafanelekile ngendlela ephumelela kakhulu yokuxhumana.
I-Twitter Automation Rule Builder - Gcina isikhathi ngokwakha imithetho ezenzakalelayo lapho umuntu obalulekile ezibandakanya nawe. Isibonelo: ukuthumela i-imeyili uma othile onabalandeli abangaphezu kuka-20,000 XNUMX ekulandela. Kuhlakaniphile, akunjalo?
Ama-Chatbots we-Twitter Direct Message nokusakazwa - Ngomakhi we-Chatbot we-Audiense Connect, ungakha i-chatbot yakho yokungena ngokuchofoza okumbalwa bese uzibandakanya nababhalisile noma amakhasimende nge-Twitter usebenzisa i-Direct Messages ngokuzenzakalela.
Izibalo ze-Tweet - Qedela ama-Analytics wamahhala anikezwa yi-Twitter ngokuqonda okuphelele kokuthi ngubani ohlanganyela nama-tweets akho angcono. Bangeze ohlwini, noma ubhekise kubo ngezethameli ezenzelwe i-Twitter kumikhankaso elandelayo.
Umbiko Wokuhlangana Kwe-Twitter - Thola ezimpambanweni zemigwaqo ezinengqondo futhi uqonde ubudlelwano phakathi kwezithameli ukuze uthole ubuhlakani obudingayo ukuze ugxile kuzithameli eziqonde ngqo. Bona ukuthi iqhinga lomphakathi ngalinye lisebenza kangakanani futhi ubone ukuthi yimaphi ama-akhawunti avela emikhakheni efanayo yemakethe enenani elifanayo labasebenzisi.
Umbiko Wokuxhumana we-Twitter - Umbiko we-Affinity unikeza indlela ebonakalayo yokuqonda kangcono izintshisekelo zababukeli bakho bese wenza izinqumo ezinolwazi oluthe xaxa mayelana nokuqukethwe okuzayo okuzohambisana nokubandakanya lezi zilaleli. Qalisa i-Affinity Report ukubona ukuthi izithameli zilandela bani kakhulu ku-Twitter.
Umphathi Wezethameli Othuthukile we-Twitter - Ngokushesha nangokuzikhandla hlanganisa izinketho zokuhlunga zamaphrofayili womsebenzisi, ubudlelwano bezenhlalo, nemisebenzi yomsebenzisi ukudala izethameli ezenziwe zaba ngezakho ezithuthukisa ukuhlobana nokusebenza kwemikhankaso yakho ye-Twitter nemikhankaso ye-Organic.
Ukuqapha kwe-Twitter - Qedela ukumbozwa komhlaba wangempela wesikhathi sangempela nomlando (kusukela ngo-2006) okuqukethwe yi-Twitter. I-Audiense inikeza ukuhlaziywa kwengxoxo nokukhomba okukodwa komkhankaso.
Izithameli ze-Twitter ezenzelwe wena - Dala ababukeli be-Twitter abasebenza kakhulu emakethe. Akunandaba ukuthi izithameli zakho eziqondiwe zibaluleke kangakanani. Ukuvumelanisa okuhlala njalo nge-akhawunti yakho yezikhangiso ze-Twitter.
Zama i-Audiense Connect
Tags: isilaleliaudiense xhumaisikhathi esingcono kakhulu se-tweetizibalo ze-tweetTwitterukukhangisa kwe-twitterumbiko wokusondelana we-twitterukuhlaziywa kwe-twitterUkuphathwa kwezithameli ze-twitterUkuzenzakalela kwe-Twitteringxoxo ye-twitterimininingwane yomphakathi we-twitterukuphathwa komphakathi we-twitterukuhlaziywa komncintiswano we-twitterideshibhodi ye-twitterumyalezo oqondile we-twitter bottwitter umyalezo oqondile wengxoxotwitter landelaumbiko wezimpambano ze-twitterukuphathwa kohlu lwe-twitterUkuqapha kwe-twitterumthetho wokuphendula we-twitterimithetho ye-twitterizethameli ezenziwe nge-twittertwitter ayilandele
Nciphisa Okuthunyelwe Okuhlobene noJetpack Osukwini Olucacisiwe
Ukubaluleka Kokubambisana Kwabathengisi Ku-Lockdown